केही यूरो बचत अनि एक रेल यात्रा युरोप लिनुहोस् | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > केही यूरो बचत अनि एक रेल यात्रा युरोप लिनुहोस्
विगतमा भन्दा 10 वर्ष, लाखौं यो एक रेल लिन कसरी लाभदायी छ समझ छ! greenery को धनी क्षेत्रहरू, स्पार्कलिंग कोस्टलाइनहरू, र प्राचीन पहाड reefs यात्रा ब्रोशर वा ब्लगहरूमा कहिले उल्लेख गरिएको छैन. ट्रेन लिनु रमाईलो छ, सुविधाजनक, र वालेट-मैत्री तरीका बिन्दु A बाट पोइन्ट B सम्म पुग्न, त्यसैले दुई पटक सोच्न छैन, रेल लिन!
युरोप र सामान्यतया रेलहरूको बारेमा दोस्रो ठूलो कुरा यो हो कि उनीहरू कसरी बजेटमैत्री हुन सक्छन्. मात्र होइन त्यहाँ त धेरै छन् सस्तो गन्तव्य छनौट गर्न, तर पनि असंख्य तरिकामा सामान्य यात्रा खर्च मा तल कट गर्न. त्यसैले तपाईंलाई रेलवे कहिलेकाँही चाँडै हान्न चाहनालाई हुनुहुन्छ भने, यहाँ प्रयोग गर्न केही ठूलो सुझावहरू छन्:
को के गर्न केही समय लाग्न अनुसन्धान र योजना तपाईं रेल लिन अघि
प्रायजसो तपाईं एक रेल लिन गर्दा, तपाईं आफ्नो टिकट बाहिर सबैभन्दा बनाउन सक्छ(को) छिटो अनलाइन खोज संग. यदि सम्भव छ भने अग्रिम आफ्नो टिकट बुक. वर्ष को के समय टिकट मूल्य भन्दा कम हो जाँच, तपाईंले ती छूट लागि चित्रमाला हुनुहुन्छ निश्चित. सामान्यतया, हरेक देशको लागि उपलब्ध सस्ता विकल्प केही क्रमबद्ध हुनेछ टिकट खरिद. त्यसैले, आफ्नो अनुसन्धान गर्न! यो माध्यम पढ्नुहोस् ब्लग विभिन्न विकल्प संग थप परिचित बन्न.
Montpellier टूलूस गाडिहरु गर्न
मार्सेइल टूलूस गाडिहरु गर्न
जब तपाईं एक ट्रेन लिनुहोस्, रात द्वारा यात्रा
तपाईं कि एक विद्यार्थी जो यात्रा गर्न मन पराउँछन् वा नियमित यात्री जो दैनिक आधारमा ट्रेन लिन्छ, एक रेल मा सुतिरहेको संभावित लगभग आधा आवास मा खर्च मुद्रा तल कटौती गर्न सक्छन्. तपाईंले एक शहर मा निदाउँछन् र अर्को मा उठ रूपमा यो समय बचत गर्न एउटा अविश्वसनीय तरिका पनि हो. त्याे भनेपछि, यो रात रेल आवास को विभिन्न प्रकार बुझ्न महत्त्वपूर्ण.
compartments छ कि सबै भन्दा राम्रो हो रेल. तपाईं गोपनीयता लागि पर्दा एउटा ओछ्यानमा साथ गठन गर्ने एक रेल लिन जब सिट सँगै झिकेर गर्न सकिन्छ. अर्को हो couchettes, सस्ता र सबै भन्दा व्यापक विकल्प. यी कोठा चार छ गर्न bunks र यूनिसेक्स छन्, त्यसैले तपाईं आफ्नो गोपनीयता एक बिट बलिदान गर्न. पछिल्लो र सबैभन्दा महंगा विकल्प को ताजा स्थिति छ. यो एक कहीं अधिक आरामदायक र निजी छ, विकल्प सबै अझै पनि एक होटल को कोठा भन्दा सस्ता छन्.
कोपेनहेगन भियना गाडिहरु गर्न
खाद्य र पेय पदार्थ मा सुरक्षित र एक ट्रेन लिनुहोस्
तपाईंको आफ्नै खाना पैकिंग टाढा गरेर बारेमा जान सस्ता तरिका हो. मनपर्दैन नियमित यात्रा बस वा कार द्वारा, तपाईं एक रेल लिन गर्दा तपाईं वास्तवमा आराम खान सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा बढी सिट एक खींच-बाहिर तालिका वा दुई सिट बीच एक निश्चित तालिका छ. तथापि, तपाईं यदि आफ्नो खानेकुरा किन्न र आफ्नो यात्राको समयमा पेय पदार्थ, ठिकै छ. रेल मा खानाको अचाक्ली pricey छैन र तपाईं अक्सर छूट दिनको कार्ड लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
बरद नेन्टस गाडिहरु गर्न
नेन्टस गाडिहरु गर्न लियोन
नेन्टस गाडिहरु गर्न Marseilles
रेल आफ्नो यात्रा को लागि योजना तपाईं आफ्नो यात्रा कोष को बाहिर सबै भन्दा बनाउन मदत गर्न सक्छ! राम्रो जडान पत्ता अक्सर हुन सक्छ एक विमान पक्रने भन्दा सस्ता, र कार द्वारा यात्रा भन्दा बढी सहज. पक्कै पनि आफ्नो सम्पूर्ण छुट्टी समृद्ध तुल्याउने एक अद्वितीय अनुभव को लागि एक रेल लिन!
एउटा ट्रेन लिन सुरक्षित-एक-ट्रेन, तपाईंको गन्तव्य छनौट गर्नुहोस्, र ट्रेनलाई व्यावहारिक रूपमा जहाँसुकै युरोपमा बजारमा सबै भन्दा किफायती मूल्यहरूमा लिनुहोस्! र, अन्दाज गर्नुहोस्? जब तपाईं सुरक्षित रेलमा आफ्नो रेल टिकट प्राप्त, बुकिंग प्रक्रिया भित्र3मिनेट, त्यसैले आफ्नो बैग प्याक र निम्नानुसार कि सबै आनन्द!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#नाइटट्रेन #traveleurope ट्रेन यात्रा सल्लाह traveltips